မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် IGE Group of Companies မှ CEO ဖြစ် သူ ဦးသန်းဝင်းဆွေနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်း၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးမင်းခိုင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Ly Quoc Tuan အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်စိုးသည် SEPF မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Jose Antonio Tan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် အရှေိ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်သော ဦးအောင်မျိုးမြင့်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှ Misssion လာရောက်မည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သူ Mr. Masahiro Hayafuji အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် METRO Wholesale Myanmar Ltd ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Jens Michel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ